FBC - Abadan, kanaan booda rakkoon akka kaleessaa deebi'ee nu hin mudatu-Preezdaant Lammaa Magarsaa
FBC Jimaata Caamsaa 17 2010 E.C. - Friday, May 25 2018 G.C.
Humni dhaabbilee barnoota olaanaatti leenji’e jireenya hawaasaa jijjiraa jira jedhame
Ityoophiyaan liqii Doolaara miliyoona 201 Deenmaark waliin mallatteessite
Waajjiraaleen argannoo odiitii sirreessuuf fedhii dhaban baay’inni isaanii dabalaa dhufuu eerame
Traamp waltajjii Kiim Joong Uun waliin beellamatan haqan
Oromiyaan sirreeffamtoota 7,611f dhiifama taasise
Abadan, kanaan booda rakkoon akka kaleessaa deebi'ee nu hin mudatu-Preezdaant Lammaa Magarsaa
Finfinnee, Caamsaa 11,2009(FBC) -Warshaan Daakuu Yuuniyeenii Hojii Gamtaa Qonnaan Bultoota Raayyaa Waakkannaa Dodolatti ijaarrame har’a ebbifame.
Yuuniyeenichi bara 1996 waldaalee bu'uuraa 9n aanaalee Dodolaarraa 6 fi Adaabbaarraa babaahan 3n, miseensa qonnaan bultoota 3,684 hundeeffame.
Yuuniyeeniin kun amma miseensota kuma 31 ol kan qabu yammuu ta’u, kanneen keessaa 20% dubartoota.
Qoonnaan bultoonni 78% qaama kanaa ta'anniiru.
Warshaan Daakuu Raayyaa Waakkannaa kun Birrii miiliyoona 30n ijaarrame kan xumurame yammuu ta’u, guyyaatti nyaataa fi daakuu kuntaala 800 omishuu danda’a.
Ebba warshichaan cinaatti dhagaan bu'uuraa warshaa paastaa fi makoroonii Raayyaa Wakkannaas preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, Afyaa'ii Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa obbo Abbaa Duulaa Gammadaan fi keessummoonni federaalaa fi naannoo jiranitti kaa'ameera.
Preezdaantiin naannichaa obbo Lammaa Magarsaan haasaa ebba warshichaarratti taasisaniinis, "Abadan! Kanaan booda rakkoon akka kaleessaa deebi'ee nu hin mudatu!" jedhan.
Obbo Lammaan qonnaan bulaan Oromoo hojiinsaa qonna qofa ta’uu hin qabu; warshaa ijaarratuun abbaa qabeenyaa ta’uu qabas jedhan.
Dinagedeen qonnaan bulaa hamma dafqasaa hin taane, teknooloojii oomishaa fi omishtummaa isaatti dabaluun dandda'amus; haalli gabaa danqeera. Kanaafuu dhimmi gabaa hojii keenya ta'a jeedhan obbo Lammaan.
Warshaa ijaarree arguun galma keenya miti; raayyomnee, tokko ta'uun immoo humna misoomaa hin dabne ta'a jedhan.
Karaan keenya baay'ee fagoodha; deemsa jalqabneerra. Akka hin laafne, akka hin gufanne diinagdeen Oromiyaa akka cimuuuf tokko ta'uun filannoo dhumaati jedhan preezdaant Lammaa Magarsaan.
Ministirri Ministeera Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Dooktar Iyyaasuu Abrahaan, qonni meekaanaayzeeshinii akka babal'atuuf gareen qonnaan bultootaa gurmaa'an gahee olaanaa qabu jedhanii, yuuniyeeniin kunis imaammata kana milkeessuuf qooda bahaa jiru itti fufuu qabaan himan.
Hojii gaggeessaan Yuuniyeenichaa obbo Mohaammad Yuusuuf warshaa kanaan naoommi 105 carraa hojii ni argatu jedhan.
Akka biyyaattis yuuniyeeniin qonnaan bultootaa namoota 800,000 oliif carraa hojii akka uuman himameera.
Maddi; Waajjira Preezdaantii naannichaa
Oduuwwan Biroo « Dhaabbileen addaddaa lammiilee hongeen miidhamaniif deeggarsa Birrii miiliyoona 8 ol taasisan	Rabsaan Paaspoortii Dhaabbata Tajaajila Poostaa Itiyoophiyaa jalqabameera »